Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Nortal na -enweta oke pere mpe na Talgen
Nortal abanyela na nkwekọrịta nkwekọrịta iji nweta oke pere mpe na mbido cybersecurity Talgen iji kwalite ike cybersecurity ma mepee ohere ọhụrụ na Europe, North America, na GCC.
Talgen bụ ụlọ ọrụ nchekwa cybersecurity nke na -elekwasị anya na nchekwa ụlọ ọrụ na ahịa nchekwa. Ụlọ ọrụ ahụ na -emepụta ngwaọrụ na ọrụ maka ndị isi ụwa ka ha jikere onwe ha ịlụ ọgụ megide iyi egwu cyber na iji hụ na ọganiru azụmaahịa na -aga n'ihu.
Dabere na Onye guzobere na onye isi Nortal, Priit Alamäe, nke a bụ atụmatụ itinye ego maka ụlọ ọrụ ahụ iji gbasaa onye isi ya na ngalaba cybersecurity, nke bara nnukwu uru maka ndị ahịa Nortal dị ugbu a na ndị ahịa ọhụrụ. Alamäe kwuru, "Gọọmentị na ndị otu ụwa niile kwesịrị ịdị njikere ịlụso ihe iyi egwu cyber dị mgbagwoju anya, yabụ anyị na -ahụ ma ihe a chọrọ yana ohere na mmegharị a."
Alamäe kwukwara, "Dị ka akụkụ nke mmekorita atụmatụ a, anyị ga na -ewu ndị otu ndị ọkachamara nchekwa cybersecurity ma na -ewetara ndị ahịa anyị ahụmịhe dị elu iji nyere ha aka belata ihe iyi egwu ma melite nkwụsi ike."
Martin Ruubel, onye isi oche nke Talgen kwuru, "Dika iyi egwu cyber na -ebute nnukwu ihe egwu dị iche iche, a na -edepụta cybersecurity n'etiti ihe kacha mkpa na nchegbu maka ndị isi na bọọdụ."
Ruubel kwukwara, "Ndị otu mfu na -eche ihu site na ihe mberede cyber na -aga n'ihu na -abawanye - atụmatụ ọhụrụ na -etinye ọnụ ọgụgụ ahụ na puku ijeri dọla 6 n'ụwa niile, naanị n'afọ a - yabụ uru ikike nke otu nwere ike ịlaghachi azụ na ndakpọ ma ọ bụ arụ ọrụ na -adị oke mkpa," Ruubel kwukwara.
Dị ka Ruubel si kwuo, nke a pụtara na ọrụ Talgen na ngalaba a dị oke egwu bụ ịnweta teknụzụ na ụzọ isi meziwanye nguzogide cyber nke ndị otu, na -enyere ha aka iguzogide mwakpo yana ibelata mfu ma ọ bụrụ na mwakpo emee.
Ruubel kwukwara, "enwere m obi anụrị isonye na ezinụlọ Nortal gbatịrị agbatị wee banye na atụmatụ imekọ ihe ọnụ a iji mee ka ụlọ ọrụ abụọ kacha mma wee jikọta ike anyị iji mepee ohere ọhụrụ."